Sidee ayuu Orlistat u shaqeeyaa sidii Daroogada Miisaanka Maansada?
/blog/Gallery/Sidee ayuu Orlistat u shaqeeyaa sidii Daroogada Miisaanka Maansada?
Posted on 03 / 02 / 2020 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Marka loo eego xogta laga soo xigtay Dib-u-eegista Dadweynaha Adduunka, Mareykanka wuxuu kaalinta 12aad ka galay adduunka ee cayilnaanta dadka ku nool. Xarunta xakamaynta Cudurrada (CDC) waxay ku qiyaastay in 36.9% dadka Mareykanka ah ee ka weyn da'da 20 sano ay yihiin buurnimo, iyadoo lagu saleynayo xog aruurinta 2016.
Tirakoobka rasmiga ah wuxuu muujinayaa in 41.1% dumarka, iyo 37.9% ragga - ama in kabadan 160-milyan oo Mareykan ah, ay la dagaallamayaan buurnida. Tirakoobka hadda jira wuxuu muujinayaa inuu labanlaabmayo cayilka tirada dadka Mareykanka soddonkii sano ee la soo dhaafay.
Nasiib darrose, xogtu uma muuqato mid aad uga wanaagsan dhalinyarada Mareykanka, sidoo kale. Qiyaastii 15% dhammaan dhalinyarada iyo carruurtu waa cayillan yihiin ama cayillan yihiin, taas oo saddex-jibaar ka badan marka loo barbar dhigo 1980-meeyadii.
Marka loo eego xogta laga helo Gobolka Cayil, xogta dhowaan laga helay Nidaamka Ilaalinta Dabeecadda Khatarta ah ee Habdhaqanka (BRFSS), waxay muujineysaa in sagaal gobol ay leeyihiin heerar buurnimo oo ka badan 35%. Kansas, Florida, New Mexico, Utah, Missouri, Minnesota, iyo New York dhammaantood waxay arkeen heerarka cayilka ee dadka waaweyn iyo caruurta inta u dhaxaysa 2017 iyo 2018. (1,2)
Marka, maxay tahay sababta uu Mareykanku ula macaamilayo cudurka faafa ee buurnida ee saamaynaya dadka waaweyn iyo carruurta ee waddanka oo dhan? Cayilnaanta waxay leeyihiin xiriir adag oo ku saabsan qaab nololeedka liita iyo caadooyinka cunnada. Caruurtu waxay ku ciyaaraan bannaanka wixii ka yar 1980-meeyadii, iyadoo horumar xagga teknolojiyad lagu soo bandhigayo cayaaraha fiidiyowga iyo qaababka kale ee madadaalada ee carruurta ka dhiga inay ku keli keli ahaadaan.
Dadka waaweyn waxay leeyihiin adeegyo madaddaalo iyo gaarsiinta cuntada oo diyaar ah saacad walba. Dhamaan raaxada dheeraadka ah ee nolosheena waxay ku kordhineysaa isticmaalka xad dhaafka ah ee kalooriyada, iyo jimicsi aan ku filneyn in lagu gubo qaadashada tamarta dheeriga ah.
Cunitaanka kalooriyado aad u badan baahida tamartaada waxay u horseedaa jirka, iyadoo lagu keydiyo tamarta dheeraadka ah dufan ahaan. Xulashooyinka hab-nololeedka liita, cunto kaloriin-cufan leh oo ay ku badan tahay karbohaydraytyada iyo dufannada xun, iyo in yar oo aan jimicsi lahayn, ayaa ah habka loogu talagalay buurnaanta - Dhammaan waxay qaadataa waa waqti.
AASraw waa budada miisaanka luminta waxtarka leh ee loo yaqaan 'supplierof budada-budada Orlistat.
Fadlan halkan guji si aad u hesho macluumaadka qiimaha. Nala soo xiriir
1. Maxay Orlistat?
Cayilku wuxuu xaddidayaa tayada nolosha qofka. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo dad badan oo Mareykan ah ay ogaadaan in cayilku uu saameyn xun ku yeelan karo caafimaadkooda, in yar ayaa go'aansada inay wax qabtaan si ay u joojiyaan horumarkooda buurnida.
Shakhsiyaadka miisaankoodu culus yahay iyo cayilkuba waxay leeyihiin aqoon iyo anshax ay u baahan yihiin si ay u fuliyaan isbadello jirka ama cunno xaddidan kaloriinka. Kuwa bilaaba isbedelka jirka, inka yar 5% ayaa maareeya si ay u gaaraan culeyska hadafkooda.
Xaqiiqdu waxay tahay luminta dufanka jidhka ee xad-dhaafka ah markaad cayillan tahay ama cayillan tahay waa caqabad inyar oo umuuqata inay ka adkaadeen. Badalida caadooyinka nolosha, bedelida cuntada, iyo bilaabida qorshe jimicsi waxay u baahan tahay qaddar weyn oo u heellan iyadoo laga wakiil yahay shakhsiyadda cayilan.
Hanuun la'aan iyo dhiirrigelin la'aan, qofka weyni wuxuu ku lumiyaa dhiirigelinta is beddelka jirkooda, taasoo u horseedda inay dib ugu dhacaan dhaqankii is-baabi'in lahaa.
Horumarka sayniska nafaqada ee 20-kii sano ee la soo dhaafay wuxuu soo saaray waxoogaa xiiso leh oo xiiso leh oo ku saabsan xalalka dawooyinka ee maaraynta iyo daaweynta buurnaanta. "Quduuska ah" ee cilmi baarista pharma waa in la abuuro kiniin miisaan lumis heer sare ah oo u oggolaanaya shakhsiyaadka cayilan inay ku soo celiyaan jirkooda BMI caafimaad qaba.
Waxaad isku arki kartaa inaad ka shakisan tahay nafaqeeye kasta ama takhtar kuu sheegaya inuu jiro kiniin miisaan lumis wax ku ool ah u leh cayilka.
Orlistat, haddii kale loo yaqaan magacyadooda astaanta ah ee Alli iyo Xenical, waxay awood u leedahay inay noqoto daroogada miisaan luminta mucjisada ah oo siisa shakhsiyaad aad u waaweyn fursad ay ku soo celiyaan caafimaadkooda.
Shakhsiyaadka miisaanka culus waxay ka iibsan karaan Orlistat miiska 60mg (Alli). Nooca 120mg (Xenical), wuxuu u baahan yahay rijeeto dhakhtar si loo iibsado loona isticmaalo. Waxaa jira noocyo badan oo jaanis ah oo laga heli karo internetka sidoo kale.
Orlistat waa daawo loogu talagalay in lagu kabo barnaamijka cuntada iyo jimicsiga qofka. Sidaa darteed, uguma wici karno kiniin miisaan lumis mucjiso ah, maxaa yeelay wali waxay uga baahan tahay adeegsadaha inuu xoogaa xoogaa ku shubo cuntadooda iyo jimicsi ahaanba.
Si kastaba ha noqotee, warbixinnada isticmaalaha waxay soo jeedinayaan in Orlistat ay tahay dawo wax ku ool ah oo loogu talagalay dardargelinta miisaanka luminta marka lagu maamulo hagida nafaqada iyo jimicsiga saxda ah ee baahida shakhsiga cayilan.
Dadka waaweyn ee da'doodu ka weyn tahay 18 sano jir waxay iibsan karaan 60mg kiniiniyada Orlistat kiniiniga, iyadoo la siinayo inay haystaan ​​Maaddada Mass Mass Index (BMI) 25 ama ka weyn. Shakhsiyaadka aadka u buran ee qaba BMI ka weyn 30 ayaa booqan kara dhakhtarkooda si loo qoro kiniiniyada kiniiniga ah ee loo yaqaan '120mg orlistat' oo loo isticmaalo marka lagu daro a cunto cayilka.
Dhakhaatiirtu sidoo kale waxay ogolaan karaan isticmaalka nooca 120mg ee shakhsiyaadka qaba BMIs sida ugu hooseeya 27, haddii ay sidoo kale la macaamilaan dhibaatooyinka kale ee caafimaad, sida sokorowga ama dhiig karka. Shakhsiyaadka isticmaalaya Orlistat ee hoos yimaada kormeerka xirfadleyda caafimaad waxay codsan karaan inay caymiskooda daboolaan kharashaadka daawada.
Si kastaba ha noqotee, maahan in caymisyada oo dhami ay dabooli karaan daaweynta. Ka helitaanka adeeg bixiyaha Orlistat khadka tooska ah waa wax sahlan, tilmaamaha qiimaha Orlistat ee iibiyaasha internetka way kala duwan yihiin, waxayna kuxirantahay sumcadda iyo tayada.
Marka, sidee buu u shaqeeyaa Orlistat?
Orlistat waxay ka hortageysaa marinka GI inuu ka nuugo baruurta cuntada aad cuneyso. Sidaas darteed, dufanka aan la cunin ee cuntadaadu waxay maraysaa habka calooshaada, halkaas oo jirku si gaar ah uga sarrayo arrinta fecal.
Karbohaydraytyada iyo borotiinada waxay leeyihiin 4-kalori oo tamar ah garaam walboo garaam ah. Si kastaba ha noqotee, garaam baruur leh 9-kalooriyo. Sidaa darteed, fikradda ka dambeysa isticmaalka Orlistat waa in laga hor istaago shaqsiyaadka cayilan inay soo nuugaan nafaqadaan kaloriin-cufnaanta leh.
Shakhsiyaadka cayilan waxay sida caadiga ah cunaan cunno dufan badan, xulashooyinka cuntadooduna ma ahan kuwa caafimaad qaba. Adoo xaddidaya qaadashada kalooriga iyo u beddelashada cuntada cayilka shaqsiyaadka ikhtiyaarrada caafimaadka leh, shakhsiyadda culeyska badani waxay bilaabi doontaa inay si dhakhso leh u aragto natiijooyinka usbuuc-usbuuc-ka ah ee isbeddelka jirkooda.
Si kastaba ha noqotee, shakhsiyaadka aadka u buran ayaa laga yaabaa inay qaataan ilaa 3 illaa 5 sano oo ay ka go'an tahay isbeddelada cuntada, jimicsiga, iyo qaab nololeedka, ka hor inta aysan ku soo noqon BMI caafimaad qabta.
Joogitaanka joogtada ah ee isbedelka miisaanka luminta ee weynaantaan ayaa caqabad ku ah aadanaha kasta. Sidaa darteed, shakhsiyaadka aadka u buunbuunsan waxay ku buuxin karaan barnaamijkooda cuntada iyo jimicsiga iyagoo adeegsanaya Orlistat si loo dardar galiyo natiijooyinka.
2. Orlistat Ma loo Oggol yahay Badbaadinta Isticmaalka FDA?
Sida daroogada kasta, Orlistat waxay ku dhaqaaqday falanqayn iyo tijaabooyin FM ah. Orlistat FDA ogolaanshuhu wuxuu soo dhex maray 1999 isaga oo hoos imanaya CAS Number 96829-58-2.
FDA waxay tijaabisay noocyada caanka ah ee daroogada ee tijaabooyinka bukaan socodka intii lagu jiray 1999, iyagoo ansixiyay nooca Xenical ee daawada ku habboon isticmaalka iyada oo ay weheliso hagista xirfadle caafimaad oo tababaran. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la ogaado in Xenical lagu heli karo oo keliya warqad dhakhtar qoro.
FDA waxay u ogolaatay Alli (60mg Orlistat) inay aamin u tahay isticmaalka shakhsiyaadka miisaan culus ee ka weyn da'da 18 sano. Si kastaba ha noqotee, nooca 60mg ayaa loo heli karaa iibsashada miiska dushiisa. In kasta oo nooca OTC loo adeegsan karo oo keliya kaabis xakameynaya, xayr yar, ma jiro caddeyn rasmi ah oo hagitaan ah oo loo baahan yahay marka shakhsiyaadka miisaankoodu culus yahay iibso Orlistat miiska dushiisa
FDA waxay lasocdaa dhammaan warbixinada saameynta xun ee isticmaaleyaasha Alli iyo Xenical, noocyada sumadda leh ee Orlistat. Hay'addu waxay heshay kumanaan ka mid ah ogeysiisyada isticmaaleyaasha ee la xiriira waxyeelada-side iyo dhacdooyinka caafimaad ee xun ee dhaca inta lagu jiro isticmaalka daawada.
Iyadoo la adeegsanayo warbixintan caafimaad ee xun ee badan, waxay ka cabsi gelin kartaa dadka isticmaala qaarkood inay ka fogaadaan inay ku darto barnaamijka miisaan luminta. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadu waxay tahay in dhacdooyinka caafimaad ee xun ee ay u soo gudbiyeen FDA dadweynaha, kaliya waxay la xiriiraan Alli iyo Xenical, mana si gaar ah Orlistat.
Ilaa maanta, ma jiraan wax caddeyn caafimaad ah oo muujinaya in Orlistat uu mas'uul ka yahay dhacdooyinka caafimaad ee xun ee soo maray isticmaaleyaasha Alli iyo Xenical. Waa suurta gal gebi ahaan in dhibaatooyinkan ay ka imaan karaan maado kale oo loo isticmaalo soo saarista daawada.
FDA waxay sii wadeysaa inay baareyso waxyeelooyinka iyo arrimaha la xiriira sunta ku saabsan isticmaalka Alli iyo Xenical. Si kastaba ha noqotee, weli ma aysan soo saarin wax caddayn ah oo ku saabsan joojinta nabadgelyada iyo oggolaanshaha daawooyinka.
FDA waxay sidoo kale welwel ka qabtaa xaqiiqda ah inay hesho warbixinno ku saabsan 1 keliya 2007kii dhacdo ee kasii xun. Hay'addu waxay sidoo kale sameysay tijaabooyin ku saabsan sunta beerka ee Alli dadka isticmaala sanadkii XNUMX.
Tijaabooyinka waxaa ka mid ahaa falanqaynta baaritaanka pre-kiliinikada, kiliinikada, dib u iibinta, iyo macluumaadka isticmaalka daroogada ee la xiriira sunta daran ee beerka iyo dhaawaca sababta oo ah adeegsiga dawada sumadda Xenical. (3)
Natiijooyinka daraasadda waxay soo gabagabeeyeen in Xenical uusan wax xiriir ah la laheyn sameynta sunta daran ee beerka ama dhaawaca.
Si kastaba ha noqotee, FDA waxay aqoonsatay 12 kiis oo ka mid ah falanqayntii suuqa ka dib la xiriirta dhaawacyadii ku dhacay beerka ee ay sababtay Xenical, iyo mid ka mid ah isticmaalka Alli. Daraasad dheeri ah oo caddaynta ah ayaa muujineysa in arrimo kale oo wax ku biirinaya, sida fuuq-baxa, iyo sumad-ka-isticmaal ama dawo loo qoro, ayaa lagayaabaa sababaha dhaawaca beerka ee daran kiisaskaas. (4)
3. Orlistat sida daroogada Miisaanka Maansada
Marka xigta ee aad ku soconaysid dariiqa dheeriga ah ee GNC ee deegaankaaga, fiiri qaybta dufanka ka dhaca. Waxaad kuheli doontaa daraasiin badeecooyin lumis miisaanka ku jira qaabka kaniiniga. The miisaanka luminta khasaaraha ganacsigu waa warshad bilyan doolar ah, waxaana jira noocyo badan oo isku dayaya inay xukumaan meeshan.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Orlistat uu yahay daroogo miisaan lumis ah, oo aan ahayn miisaan lumis dheeri ah. Haddii aad qaadatid waxyaabo badan oo miisaankaaga kaa luma, waxaad la kulmi kartaa xoogaa waxyeelo daran oo kuleylka leh, sida calool xanuun ama xoogaa koror ah oo kicinta iyo heerkulka ah.
Si kastaba ha noqotee, si xun u isticmaalka ama si xun u isticmaalka daawada daroogada oo miisaankiisu hoos, sida Orlistat, waxay ku dambayn kartaa waxyeelo ba'an oo daran oo saameyn kara wanaaggaaga wanaagga muddo dheer.
Orlistat si fiican ayey u shaqeysaa, isticmaaleyaasha qaarna waxay go'aansan karaan inay kordhiyaan qawaaniintooda si kor loogu qaado natiijooyinkooda. Si kastaba ha noqotee, istiraatiijiyaddani waa hubaal inay ku degayso isticmaaleha dhibaato xoog leh oo caafimaadkooda ah. Kaliya u isticmaal Orlistat iyadoo lala kaashanayo kormeerka caafimaadka, gaar ahaan haddii aad isticmaaleyso qaabka 120mg.
A: Sidee loo lumiyaa miisaanka adoo qaadanaya Orlistat?
Markii la fulinayo adeegsiga Orlistat ee miisaan lumis, adeegsaduhu waa inuu raacaa talooyinka dhakhtar caafimaad, gaar ahaan marka la isticmaalayo qaabka 120mg ee daroogada. Kahor inta uusan qofku bilaabin barnaamijka miisaanka luminta, waxay u baahan yihiin inay yeeshaan maskax saxda ah si ay u fuliyaan isbedelka jirka ee guusha leh.
Qofka aadka u buuran ama buuran ayaa u baahan in la fahmo in daroogada aysan aheyn jawaabta dhibaatooyinkooda. Xalka kaliya ee miisaanka dheer ee miisaanka lumaya waa iyada oo la hagaajiyo cuntada, habdhaqanka qaab nololeedka, iyo soo bandhigida barnaamijka jimicsiga joogtada ah.
Iyadoo aan lahayn maskaxdan, shakhsiga cayilan ama cayilan ayaa aakhirka isku dayi doona inuu ku tiirsanaado isticmaalka xad dhaafka ah ee daawada marka aysan arkin natiijooyinka ay ka doonayaan dadaalkooda. Si xad dhaaf ah oo loo isticmaalo daroogada miisaanka luminta waxay ku lug yeelan kartaa horumarinta waxyeelo daran oo dhaawici karta caafimaadka isticmaalaha.
Markaad u isticmaaleyso Orlistat qaab kasta, hubi inaad raacdo tilmaamaha qiyaasta dawada ee ku qoran weelka, ama farmasiilaha daawada ku siiya. Qiyaasta Orlistat way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran BMI-ga qofka. Si kastaba ha noqotee, ha u qaadan daawada muddo ka dheer inta laguu qoray, ama ku liis gareynta galka alaabada.
Shakhsiyaadka cayilan iyo kuwa culus waxay isticmaali karaan Orlistat oo ay weheliyaan cunno takhasus gaar ah leh, dufan yar, kalooriye xaddidan. Marka la dhisayo qorshaha cuntada shaqsiga, nafaqeeyayaasha waa inay hubiyaan in dufanka uusan ku jirin wax ka badan 30% wadarta kalooriyeyaasha ku jira cunto kasta.
Shakhsiga cayilan waa inuu raaco qorshahooda cunnooyinka iyo jimicsiga, oo uu qiyaaso Orlistat sida ku xusan tilmaamaha dhakhtarkooda. Borotokoollada dawada badankood waxay soo saaraan saddex qiyaasood oo daawo ah maalintii oo dhan si siman oo kala fog.
Haddii isticmaalehu ka boodo cuntada, ka dib waa inay ka boodaan qiyaasta Orlistat ee looga baahan yahay cunnadaas sidoo kale.
Haddii aad ka boodo cuntada ama aad cuno cunto aan lahayn dufan, ka bood qaddarkaaga Orlistat ee cuntadaas. Isticmaalaha sidoo kale waa inuu bilaabaa inuu fiiro gaar ah u yeesho sumadaha nafaqada ee cuntooyinka. Aqri liiska waxyaabaha kujira iyo nafaqada, iskana ilaali cunnooyinka dufanka badan.
Orlistat sidoo kale waxay faragelin ku haysaa qaadashada saxda ah ee fiitamiinnada biyaha lagu millo ee cuntadaada ku jirta. Sidaa daraadeed, bukaanku waa inay weydiistaan ​​dhakhtarkooda inay kugula taliyaan nooca fiitamiinnada ay qaadan karaan markay isticmaalayaan dawada.
Isticmaalayaasha sidoo kale waa inay la socdaan dawadooda iyo isticmaalkooda daawada. Orlistat waa daawo awood u leh in si qaldan loo isticmaalo qoraalka. Sidaa darteed, dadka kale ayaa laga yaabaa inay ku dhex milmaan daawadaada haddii aadan fiiro gaar ah u yeelanin isticmaalkaaga.
Qaado wax supplements ama dawooyin kale ah ugu yaraan 2-saacadood ka hor qaadashadaada Orlistat. Istaraatiijiyaddan qaadashada waxay ka hortageysaa wixii jawaab celin xumo ah ee ka timaada daawooyinka kale ee aad isticmaaleyso. Haddii aad ku jirtid nooc kale oo daawo ah, hubi inaad takhtarkaaga u sheegto ka hor intaadan isticmaalin Orlistat.
B: Maxaan Ka Fogaadaa Inta Aan Isticmaalayo Orlistat?
Markaad dhakhtarkaaga kala tashanayso caafimaadkaaga iyo qorshahaaga inaad ku garaacdo buurnaanta, hubi inaad kala hadasho dhammaan arrimaha kale ee caafimaadka takhtarkaaga sidoo kale. Dhakhtarku wuxuu u baahan yahay inuu ka warqabo dhammaan daawooyinka aad hadda qaadatid ka hor inta aysan kuu qorin Orlistat.
Daawooyinka qaarkood waxay u horseedi karaan waxyaalaha ka hortagga daawooyinka kale, taasoo ka dhalata waxyeelo daran qofka isticmaala. Waa inaad u sheegtaa takhtarkaaga isticmaalkaaga mid ka mid ah daawooyinka soo socda.
Dawooyinka cudurka macaanka ee afka laga qaato ama isticmaalka insulinta
Cyclosporine (Sandimmune, Nestero, Gengraf)
Levothyroxine (Levoxyl, Synthroid, Levothroid)
Dawooyinka khafiifinta dhiigga sida warfarin (Coumadin)
Waxaa muhiim ah in la ogaado in tani aysan ahayn liis dhamaystiran oo daroogo ah oo sababi kara dhibaatooyin isticmaalka Orlistat.
Ballan la sameyso dhaqtarkaaga si aad ugala hadasho dhamaan daawooyinka laguu qoro, kaabeyaasha, iyo waxyaabaha kale ee OTC ee aad isticmaashid oo sababi kara is-dhexgal ka hor inta aad isticmaaleynin Orlistat.
Duruuf la'aan qaado Orlistat adiga oo aan marka hore la tashan aqoonyahan caafimaad. In kasta oo nooca 60mg uu diyaar u yahay isticmaalka OTC, adeegsaduhu waa inuu wali la tashado xirfadle caafimaad ka hor inta uusan ku darin cuntadooda iyo qorshaha jimicsiga.
Marka lagu qaato qaadasho aad u sarreysa ama muddo dheer, Orlistat wuxuu sababi karaa dhibaatooyin caafimaad oo daran. Shakhsiyaadka u maleynaya inay ka badin lahaayeen Orlistat waa inay si deg deg ah wacaan khadka caawinta sunta oo wacaan ambalaas.
Bukaanka waa inay ka fogaadaan qaadashada Orlistat haddii ay wax xasaasiyad ka qabaan waxyaabaha ku jira dawada. Ha qaadan Orlistat haddii aad la macaamilayso mid ka mid ah xaaladaha caafimaad ee soo socda.
Cudurka malabsorption syndrome ee raaga
Dhibaatooyinka kaadi haysta
Taariikhda cudurka loo yaqaan 'Pancreatitis'
Nooca sonkorowga I ama II
Cunno xumida sida anoreksiyada ama bulimiyada
Haddii hada la isticmaalo daawo kale oo miisaan lumis ah ama alaabada OTC
4. Waa maxay waxyeelada aad ka filan karto Isticmaalka Orlistat?
Waxay muhiim u tahay shakhsiyaadka inay fahmaan inaysan jirin wax la yiraahdo "daroogada miisaanka oo yaraada." In kasta oo isticmaalka Orlistat uu weheliyo cunno-xakameynta kaloriinta-xadidan iyo barnaamijka jimicsiga ayaa dardar-gelin doona miisaanka oo yaraada shakhsiyaadka cayilan ama cayilan, waxay u baahan yihiin inay dejiyaan rajooyin macquul ah oo ku saabsan geeddi-socodka.
Saameynta Orlistat way ku kala duwan yihiin qof ilaa qof, iyo sababta oo ah shaqsi walbaa wuxuu leeyahay dheef-shiid kiimikaad gaar ah iyo nooca jirka. Si kastaba ha noqotee, waxaad filan kartaa in heerka dufanka baruurta uu dhexdhexaad noqdo, iyo isticmaalka daroogada ayaa kaa caawin doonta inaad daadiso dhowr rodol isbuucii marka loo eego istiraatiijiyadaha cunnada iyo jimicsiga kaligood.
Si kastaba ha noqotee, inaad filan karto luminta degdegga ah ee dufanka waa mid aan macquul ahayn. Fursadaha ayaa waxay ku qaadatay bukaanku sanado qaar, laga yaabee xitaa tobannaan sano, si ay u gaaraan xaaladdooda cayil ee xilligan. Sidaa darteed, adoo filaynaya in dufanka uu habeen dhalaalo, ama xitaa bilo gudahood, wuxuu u oggolaanayaa isticmaaleha inuu dareemo niyadjab iyo natiijooyinkiisa.
Dhakhaatiirtu waxay ku qeexaan miisaanka macno darrada caafimaad ee dhimista miisaanka jirka ee qofka, 5% ama in ka badan sanad. Daraasadaha waxay muujinayaan in ka badan 40% Isticmaalayaasha Orlistat gaarista yoolkan, haddii ay raacaan talobixinta takhtarka iyo nafaqada.
Daraasadda ayaa sidoo kale muujineysa in shakhsiyaadkaas cunay cunno xaddidan kalori, oo ay weheliso helitaanka jimicsi joogto ah, iyo isticmaalka Orlistat, ayaa lumay celcelis ahaan 5.7-lbs in ka badan kooxda kantaroolka ee aan isticmaaleynin Orlistat. (5,6)
(1) Waa maxay Faa'iidooyinka Adeegsiga Orlistat?
Faa'iido weyn ayaa loo leeyahay isticmaalka Orlistat oo qayb ka ah barnaamij si habsami leh loo habeeyay oo lagula socdo barnaamijka miisaanka luminta. Daawadu waxay wax ku ool u tahay ka hortagga jirku inuu nuugo dufanka, sidaa darteed si weyn u dhimaysa qayb weyn oo ka mid ah wadarta kalooriyeyaasha bukaanka.
Si kastaba ha noqotee, halka Orlistat uu yahay mid wax ku ool ah oo ku saabsan cuntada miisaanka oo yaraata, oo soo saaro saameyn la taaban karo, ma yareyn karno in dadku aysan u isticmaalin daroogada sidii qashin. Shakhsiyaadkaas oo ku tiirsan warqad dhakhtar ama kaabis ahaan aasaaska barnaamijkooda miisaan lumis ayaa la kulmi doona natiijooyin liita.
Shakhsiyaadka qaarkood wax isbedel ah kuma sameeyaan cunnadooda ama heerarkooda jimicsiga oo taas bedelkeeda, waxay ku tiirsan yihiin Orlistat si ay shaqada u qabtaan. Si kastaba ha noqotee, shakhsiyaadkan waxay ku heli doonaan niyad jab natiijooyinka miisaankooda luminta.
Faa'iidooyinka Orlistat barnaamij miisaan lumis oo leh qaab qeexan iyo yoolal cad. Suurtagal maaha in bukaanku yeesho aqoon ama dhiirrigelin uu ku dhammaystiro isbeddellada jirkooda oo keliya.
Sidaa darteed, shaqaalaysiinta nafaqada iyo tababbaraha, iyo raacitaanka cunto diyaarsan iyo barnaamij jimicsi ayaa shardi u ah qof kasta oo qaadaya miisaanka luminta.
Inta badan shaqsiyaadka cayilan iyo kuwa cayilan waxay ogaadaan inay la kulmaan miisaan lumis lixaad leh labada usbuuc ee ugu horeeya ee ay bilaabayaan inay cunaan si caafimaad leh iyo jimicsi - taasina waa kahor inta aysan soo bandhigin wax dheeri ah ama daroogo sida Orlistat ah.
Si kastaba ha noqotee, shaqsiyaadka qaarkood waxay ku dhibtoon karaan inay lumiyaan dhammaan culeyska xitaa markay raacayaan cuntada saxda ah iyo barnaamijka jimicsiga. Kuwa kale ayaa laga yaabaa inay ogaadaan in horumarkoodu saanad ahaan u dhaqso badan iyadoo la adeegsanayo habab dabiici ah. Shakhsiyaadkan ayaa laga yaabaa inay ogaadaan in Orlistat ay ugu anfacayso xaaladdan, iyagoo u oggolaanaya inay la kulmaan miisaan lumis joogto ah dhammaan isbeddellada jirkooda.
(2) Maxay yahiin halista isticmaalka Orlistat?
Shakhsiyaadka ka fiirsanaya isticmaalka Orlistat waa inay qaataan wakhti si ay dib ugu eegaan liiska dhibaatooyinka soo raaca Orlistat ee la xiriira isticmaalka daroogada miisaanka oo yaraada. Orlistat waa dawo awood leh oo loogu talagalay in loogu isticmaalo agab cunno xaddidan oo kalooriye ah oo loogu talo galay shakhsiyaadka buuran ee ay aqoon yahanka nafaqada leh.
Nooca OTC ee dawada ayaa diyaar u noqon kara iibsashada iyada oo aan la qorin dhakhtar, laakiin qofna waa in aanu isticmaalin Orlistat isaga oo aan la hadlin dhakhtarkooda kahor.
Tijaabooyinka caafimaad ee ku lug leh maamulka Xenical ee bukaannada, 27% waxay ku sameeyeen saliid saliid ah hoostahooda, 24% dadka isticmaala ayaa la kulmay gaas waxaana ku xigay ka bixitaan khasab ah, 22% dadka isticmaala waxay la kulmeen bilawga xaalad degdeg ah, 11% waxay muujiyeen koror ah tirada saxarada, iyo 8% waayo aragnimo xumo.
Isticmaalayaasha badankood, shubanku sidoo kale waa saameynaha caanka ah ee isticmaalka dawada, gaar ahaan marka ugu horeysa ee la bilaabo isticmaalka dawada miisaan culus.
Xasaasiyadaha xasaasiyadda ee daawada waa naadir, iyo qaar ka mid ah dhibaatooyinka caadiga ah ee isticmaalayaashu la kulmaan toddobaadyada ugu horreeya ee isticmaalka Orlistat waxaa ka mid ah kuwan soo socda.
Saliido saliideysan ama baro ku jira dharkaaga hoostiisa
Saxanka dufanka leh ama saliidda leh
Saliidaha oranji ama midabka oranji leh ee saxarada
Gaaska oo ay weheliso dheecaan saliid ah
Saxarada dabacsan, kororka degdegga degdegga ah, iyo kartida isticmaaleysa inuu xakameeyo dhaqdhaqaaqa mindhicirka
Kordhinta soo noqnoqoshada dhaqdhaqaaqa saxarada
Lalabbo, matag, calool xanuun, shuban, iyo xanuun malawadka ah
Daal iyo daciifnimo, saxaro midab leh, kaadi kaadida madow, cunitaanka cuncunka, cuncun, ama muuqaalka cagaarshow (huruud ee indhaha ama maqaarka)
Arimaha kale ee aan caadiga ahayn ee bukaanku la kulmaan markay qaataan Orlistat waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda.
Arrimaha ciridka iyo ilkaha
Kobcinta astaamaha-u eg qabow
Kobcinta astaamaha hargabka oo kale
Madax xanuun iyo dhabar xanuun
Furuuruc yar oo maqaarka ah oo dhexdhexaad ah
Isticmaalayaashu waa inay ogaadaan in tani aysan ahayn liis dhammaystiran ee waxyeelooyinka laga yaabo inay dhacaan markay isticmaalayaan Orlistat. Haddii aad la kulanto waxyeellooyin ama falcelin diidmo ah ee daawada, u sheeg khibradaada FDA taleefanka 1-800-FDA-1088.
5. Maxay Yihiin Isticmaalayaasha Ka Hadlaya Orlistat?
Markaad eegto hareeraha dib u eegista internetka ee adeegsadayaasha, waxay keenaysaa natiijooyin kaladuwan, labadaba iyo ka hortagga isticmaalka daroogada. Dib u eegista Orlistat waxay u dhexeeyaan shakhsiyaad helay natiijooyin aad u wanaagsan ilaa kuwa la kulmay dhibaatada ugu xun ee waxyeelooyinka.
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in kiisaska badankood ee ku lug leh dadka cayilan, ama qaba BMI-yada ka weyn 27, ay khibrad wanaagsan ka heleen daroogada. Dhammaan dib-u-eegista wanaagsan ee aan ka helnay daroogada miisaanka luminta waxay ka timid isticmaaleyaasha la wargeliyey ee ku socday isbedelka jirka gacanta xirfad-yaqaanka caafimaadka.
Sidaa darteed, shaqsiyaadkani waxay u qaabeeyeen istiraatiijiyaddooda miisaan lumista si sax ah. Dhammaantood waxay soo kireysteen nafaqo-yaqaan, waxay heleen baaritaanno saddex-biloodle ah dhakhtarkooda, waxayna ku dhegaan borotokoolka qaadashada ee ay soo jeediyeen xirfadlayaal caafimaad.
Halkan waxaa ah tusaale ah natiijooyinka dhabta ah ee adduunka Orlistat ee aan ka helnay internetka.
"Magacaygu waa Ron, oo waan cayilay illaa heer ay noloshayda kharribto. Dhaqdhaqaaqa oo daaqada ka baxaya, caafimaadkaygana ka sii daraya, waxaan u jeestay dhakhtarkayga si uu i caawiyo. Doc-ka ayaa ila xiriiray dhakhtar nafaqo leh, waxaanan fahmay baahida kaloriinteyda ee maalintaas.
Kadib 6-bilood oo aan sifiican wax u cunayay oo aan maalin walba ordayay, waxaan arkay natiijooyin wanaagsan, laakiin horumarkaygu wuxuu bilaabay inuu istaago. Dhakhtarkaygu wuxuu ii soo jeediyay inaan isku dayo Xenical (Orlistat). Kama aanan fikirin wax badan, laakiin miisaankeyga ayaa sii socda ka dib maalintii labaad anigoo isticmaalaya daawada.
Sannad kadib, waxaanan dareemayaa sidii qof cusub. Waxaan udhaxeeyaa culeyska hadafkeyga, rodolkiina wuu sii socdaa. "
Ron Swanson, Jacksonville, FL, USA.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in qof walba uusan la kulmi doonin natiijadan, laakiin tani waa jaangoyn wanaagsan oo ka mid ah natiijooyinka aad filan karto markii wax waliba si sax ah u socdaan.
Tusaalahan, natiijooyinka Ron waxay ahaayeen natiijo wanaagsan, laakiin taasi maaha in la yiraahdo qof kale ma soo saari karo isla natiijooyinka naftooda, haddii ay haystaan ​​kormeer caafimaad oo sax ah.
6. Furaha Qaadashada ee Loogu Isticmaalo Orlistat sidii Miisaan Loss Loss ah
Cayilka xad dhaafka ahi wuxuu khatar ku yahay caafimaadka dadka Mareykanka ee ku nool dalka oo dhan. Heerarka buurnaanta ayaa ku sii kordhaya labadaba dadka waaweyn, dhallinta, iyo carruurta, iyadoo Gobollada Koonfurta iyo Bariga ee Mareykanka ay ku dhufteen cudur faafa.
Cayilka xad dhaafka ahi wuxuu horseedaa horumarka arrimo badan oo caafimaad oo raaga, sida sokorow, dhiig karka, iyo cudurka wadnaha. Shuruudda ayaa sidoo kale ah dhimashada 18% dhammaan dadka Mareykanka ee jira 40 illaa 85-sano jirka.
Dad badan oo Mareykan ah waxay u jeestaan ​​daroogooyinka iyo nafaqada si ay uga caawiyaan inay dardargeliyaan barnaamijyadooda miisaanka dhimista. Si kastaba ha noqotee, inbadan oo ka mid ah shaqsiyaadkan sidoo kale kuma filna inay beddelaan caadooyinkooda nololeed, cuntada, iyo jimicsiga kahor intaanay u adeegsan hababka kale ee miisaanka u dhimaya
Mareykanku waxay u baahan yihiin inay fahmaan inaysan jirin waddo gaaban oo lumiyo dufanka jirka. Helitaanka aqoonta cunitaanka saxda ah iyo caadooyinka jimicsiga ayaa muhiim u ah dib ula soo noqoshada miisaanka jirkaaga. Kahor intaadan bilaabin isticmaalka daroogada miisaanka culus ee waxyeelada leh, waxaa ugu wanaagsan in la hubiyo inaad xaq u leedahay cunista iyo inaad jimicsi sax ah marka hore sameyso.
Kaliya tixgeli inaad isticmaasho Orlistat ka dib markaad kala tashato dhakhtarkaaga waxyaabaha ku saabsan himilooyinkaaga lumista miisaanka. Dhakhtarkaagu wuxuu kuu diri doonaa xirfad-yaqaan nafaqo leh oo u leh qorshe cunto oo la kulma shuruudaha kaloorigaaga ee dufanka lumista.
Shakhsiyaadka iskudayaya barnaamijka luminta miisaanku waa inay hubiyaan inay dhisaan koox ku hareeraysan haday rabaan inay arkaan natiijooyinka. Dhakhtarkaaga, nafaqo yaqaanka, jimicsiga jimicsiga jirka, iyo tababbaraha shaqsiyeed ayaa sameeya kooxdaada taageerada si ay kuu siiyaan fursadda ugu fiican ee looga gudbi karo wixii carqalad ah oo kaa soo gaarta wadadaada si aad u gaarto yoolalkaaga miisaanka lumista.
Orlistat wuxuu la mid yahay ku darida shidaalka jet mashiinka waxqabadka si fiican loo habeeyay. Marka bukaanku leeyihiin xakameyntooda cuntada iyo jimicsiga, xakameynta daroogada miisaanka luminta sida Orlistat waxay si weyn u dardargelin kartaa natiijooyinka.
Kahor inta aysan go'aansan inay qaataan Orlistat, bukaanku waa inay la tashadaan xirfadle caafimaad caafimaad si ay u eegaan haddii ay ka soo baxaan shuruudaha u qalmidda daweynta.
Marka dib loo eego natiijooyinka khibradaha isticmaale ee Orlistat, waa jawaano isku dhafan oo natiijooyin ah. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in shakhsiyaadka qaata Orlistat ee tilmaamaha dhakhtar isla markaana shaqaaleeya kooxda taageerada saxda ah ay gaaraan natiijooyinka ay rabaan.
Dhinaca foorarka, waxaa jira dad badan oo khibrad xun u leh isticmaalka Orlistat. Sababtaas awgeed ayay muhiim u tahay shakhsiyaadka inay qaataan Orlistat iyada oo loo marayo daryeelka xirfadle caafimaad.
Orlistat waxay siisaa shaqsiyaad cayil iyo miisaan culus leh FDA-ay ka ogolaatay ikhtiyaar miyuusigga si kor loogu qaado dadaalkooda miisaanka luminta.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado in dhammaan bukaanada isticmaala daroogada, ay u baahan yihiin waxbarasho ku saabsan habdhaqanka joogtada ah ee wax ka beddelka muddada ay isticmaalayaan daroogada, sidoo kale.
Anderson JW, Schwartz SM, Hauptman J, et al. Saamaynta orlistat-ka hooseeya ee miisaanka jidhka oo ah mid dhexdhexaad ilaa shakhsiyaad miisaankoodu dhexdhexaad yahay: usbuuc 16 ah, indhoole indhoole ah, tijaabo xakameysan. Ann Pharmacother. 2006; 40 (10): 1717-1723
Smith SR, Stenlof KS, Greenway FL, et al. Orlistat 60 mg wuxuu yareeyaa unugyada visceral adipose: 24-usbuuc oo ismiidaamin ah, xakamayn placebo ah, tijaabooyin badan. Cayilnaanta (Xilliga Jiilaalka). 2011; 19 (9): 1796-1803.
2 jecel yahay
“Isha Isha Dhalinyarada”: NAD + & NMN oo ah Kaabis
Tykerb (231277-92-2) -Kulinka dilaha naas-nuujinta
Synephrine HCL Powder - Dufanka gubi iyo miisaanka oo dheeri ah	Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaatid waxyaabaha ku saabsan Pregabalin